Odeessa ariifachiisaa! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOdeessa ariifachiisaa!
Akka madda qabatamaarraa argannetti humni waraanaa PP galgala kana namoota qabuuf sagantaa akka qaban hubanneerra. Kunis Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadab Hasaasaa magaalaa Hasaasaatti kan raawwatamuuf jiru akka ta’e beekameera. Magaalaa Hasaasaatti namoota sadii kan maatii isaanii keessaa namni Amerikaa jiru, kan mooraan mana jireenya isaanii qorqoorroon ijaaramee jirudha. Mooraa kana kutanii seenuun namoota 3 qabuuf qophaawanii jiru.
Kaleessa halkanis akkasuma mana namaa cabsanii seenuun nama 5 fuudhanii hidhanii jiru.
Kanaaf, namoonni magaalaa Hasaasaa odeessa kana hubachuun of eeggannoo akka gootan dhaammanna.
#Humni_Addaa WBOdha Guyyaa Arraa waraanaa Wardiyota Sirna Nafxanyaa irraatti Tarkaanfii Fudhateen Lubbuu waraanaa Bilxiginnaa dhibba tokkoo battalumatti ajjeesera shantama madeesse jirachu #Hogganaan_Humna Furgaatuu #WBO ibsee jiraa meeshaan amayyaa 68 #WBO dhaf galii tahee jira
Ani kan jedhuu jarri kun lola Tigiraay booda ABO shanee fixna hin jennee? moo inni akka hin taane waan baraniif fuula gara Shimalliis fi PP Oromiyaa (Jalee nafxanyaa)tti deeffatan
Harargee Lixaa, Aanaa Doobbaa
“Aanaa Doobbaa Araddaa Badhaasaa Zooni Qaraaruu keessatti guyyaa arraa QAASIIM Umare nama ja’amu Makalakaya fi Humni Addaa waliin ta’uun rasaasa bayyeen dhahame jira.
Qaasiim waggaa 7 oliif Qilinxootti hidhamee kan bahe yoo tahu Loola Torbaan lama oliif gaggeessen ofirraa ittisaa tureera. Haa ta’u malee guyyaa arraa karaa Mullutiin itti seenun meesha gurgudaadhan dhahani jiran. Wanti garaa nama gubu eega gara aanaa fidani booda gubbatti dhichisu isaaniti. Dinummaan kanarraa numa hin jirree iddoon isaan isaa fidan kun iddoo Haadha fi Haati_Mana isaa itti hidhamanii jiraniidha. Maatin isaa erga wajjirraa kanatti hidhamani ji’a guutani jiru.”
10Adem Misoma and 9 others
Warri Opdon milishaa jettee Oromiyaa keessa olii gad deddeemtuun kun gariin isaanii Amaarota Gojjaamii fi Gonderii dhufaniidha